छिमेकी देश भारत र यूरोपका कतिपय देशमा पुनः फैलिदै कोरोना महामारी ! || विचार
छिमेकी देश भारत र यूरोपका कतिपय देशमा पु...
छिमेकी देश भारत र यूरोपका कतिपय देशमा पुनः फैलिदै कोरोना महामारी !
दक्षिणतिर खुल्ला सीमाना रहेको देश भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि नेपालमा चिन्ता थपिनु स्वाभाविक हुन्छ । ठूलो भूभाग, धेरै जनसंख्या, नेपालको समग्र भुगोल जोडिएको भारतमा संक्रमण डरलाग्दो गरी बढ्न थालेको छ । विश्वका मानवजातिलाई एकपछि अर्को चुनौती दिन सफल कोरोना भाइरस युरोपेली राष्ट्रमा पनि पुनः पैmलिएको खबर बाहिरिएका छ । यसले विश्वजगत तरङगित बनेको छ । कोरोना विरुद्ध भ्याक्सिन तथा उच्च सतर्कता अपनाइएता पनि महामारीका कारण युरोपेली मुलुक त्रसित बन्न पुगेका छन् । हुन् त बेलायत, फ्रान्स, नेदल्र्याण्ड जस्ता मुलुकहरुले उच्च जोखिममा परेका छन् । उनीहरुले सतर्कता अपनाएको भएता पनि कोरोना संक्रमणको महामारी पैmलिनु फेरि एक पटक टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।
कोरोना भाइरसविरुद्ध प्रभावकारी रुपमा खोप वितरण गरेको भए तापनि कोरोना संक्रमण पैmलिएपछि युरोपका स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत, अनुसन्धानसकर्ताहरु आश्चर्यकित भएका छन् । कोरोना महामारी पुनः एक पटक मानवीय जीवनशैलीलाई तहसनहस गर्ला भन्ने चिन्ताका कारण युरोपका विकसित देश आयरल्याण्ड तथा केही मुलुकहरुले रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाउन थालेका छन् । यस्ता समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यममा बाहिरिएका छन् । तर नेपालमा भने अभैm पनि लापर्वाही कायमै देखिन्छ । विना तयारी विद्यालय, क्याम्पसहरुमा पठनपाठन थालनी गरिएको छ । यसले गर्दा अभैm भयावह संक्रमण बन्ने हो कि त्रास बढाएको छ । स्कुलहरुमा अभैm पनि नेपाल सरकारले ध्यान पु¥याएको छैन । सभा, सम्मेलन, विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रम, गोष्ठीहरु र पार्टीका महाधिवेशनहरु धुमधामका साथ भइरहेका छन् । यी सबै कार्यक्रमहरु कोरोना संक्रमण बढाउने माध्यम हुन सक्ने खतरा देखिन्छ ।
यो पंत्तिकारले दुई साता अघिमात्र पोर्चुगलको भ्रमण सम्पन्न गरेर फर्केको हो । पोर्चुगलमा ८७ प्रतिशत नागरिकले खोप लगाइसकेका छन् । तैपनि पछिल्लो केही सातादेखि पोर्चुगलमा तीव्र रुपमा संक्रमण फैलिँदा त्यहा चिन्ता बढेको छ । अध्ययन अनुसन्धान गर्न सफल कोभिड १९ विरुद्धको खोप विश्वव्यापी रुपमा वितरण भइरहँदा यूरोपका कतिपय देशमा भने महामारी फेरि तीव्र बन्न थालेको छ । जसको नकारात्मक प्रभाव नेपाल जस्ता अल्पबिकसित मुलुकलाई पनि पर्नु स्वभाविक हुन्छ ।
नेदरल्याण्ड्समा फैलँदो कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले जनतालाई घुमफिरमा प्रतिबन्ध नै लगाएको छ । तर प्रतिबन्ध तोड्दै आम मानिसहरू सडकमा उत्रिएका छन् । गत शुक्रबार प्रतिबन्धको विरोधमा यहाँ हिंसात्मक प्रदर्शनसमेत भएको थियो । कतिपय देशहरू खोप लगाउनु मात्रै पनि समाधान नभएको निश्कर्षमा पुगेका छन् । खोप लगाएका मानिसहरुमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ । त्यसैले ती देशले प्रतिबन्ध कडा पार्न थालेका छन् । ती देशहरुमा अर्को उपाय नभेटिएसम्म उनीहरू फेरि कर्फ्यू वा प्रतिबन्धको सहारा लिन बाध्य देखिएका छन् ।
जर्मनी र अष्ट्रियामा त संक्रमण आकाशिएको छ । अष्ट्रेलियाले सोमबार देशव्यापी पूर्ण रुपमा लकडाउन सुरु गरेको छ । जवकि अष्ट्रियाले केही दिनयता नै खोप नलगाउनेहरूका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
यद्यपि विज्ञहरू खोपले प्रभावकारी रुपमा संरक्षण गर्नेमा विश्वस्त छन् । बेलायतस्थित इम्पेरियल कलेज अफ लण्डनका सहायक निर्देशक तथा प्राध्यापक चाल्र्स बंघमका अनुसार डेल्टा भेरियन्ट अन्यको तुलनामा धेरै नै संक्रामक मानिन्छ । हमबर्ग विश्वविद्यालयमा महामारी विज्ञान र सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानीकर्ता तथा प्राध्यापक राल्फ रेन्त्जेसले पनि खोपको प्रभावकारिता बारे प्रतिक्रिया दिएका छन् । यद्यपि खोपले मात्रै महामारी रोक्न नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता युरोपभर बढेको जनाइएको छ जर्मनी, अस्ट्रिया, नेदरल्यान्ड्स, बेलायत र इटलीमा कोभिड विरुद्धको खोपका बावजुद अहिले सङ्क्रमण तीव्र बन्ने क्रम जारी छ । नेपालमा हामी पनि अब अलिबढि नै सचेत बन्ने कि ! ? -जनधारणा साप्ताहिकबाट